एनआईसी एशिया बैंकको स्वामित्वमा रहेको तीन कम्पनीको संस्थापक शेयर पुनः लिलामीमा - Aarthiknews
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको स्वामित्वमा रहेको तीन कम्पनीको संस्थापक शेयर साउन १९ गतेदेखि पुनः लिलामीमा आएको छ । यस अघि पनि पटक पटक लिलामीमा विक्री गरी बाँकी रहेको मेरो माइक्रोफाइनान्सको ८९ हजार ४३९ कित्ता, नागरिक लगानीकोषको ३ लाख ५० हजार ३६९ कित्ता र आरएमडिसी लघुवित्रको ३ लाख १० हजार १६५ कित्ता शेयर पुनः लिलामीमा विक्री गर्न लागिएको हो ।
यी शेयर खरिदका लागि बोलकबोल गर्न प्रतिकित्ता न्यूनतम मूल्य मेरो माइक्रोफाइनान्सको रू. ५९५, नागरिक लगानीकोषको रू.१ हजार ४६३ र आरएमडिसी लघुवित्तको रू. ५०६ तोकिएको छ । यी शेयरमा बोलकबोल गर्दा तोकिएको मूल्य वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ ।
यी शेयर खरिदका लागि न्युनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्रासम्म माग गर्न सकिनेछ । यो शेयर बाँडफाँटमा प्राप्त गर्ने आवेदकहरुले कम्पनीहरुद्वारा साउन १९ गतेपछि सार्वजनिक गरिने लाभांश तथा हकप्रद शेयर समेत प्राप्त गर्नेछन् । यी शेयर विक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।